I-China Central Console kunye ne-DC Drayivu yeKhabhinethi yemveliso kunye nabenzi | Mingshuo
Ol uchungechunge DC drive ubukhulu becala kusetyenziswa ukuqhuba DC iimoto, kwaye lisetyenziswa ngokubanzi iwelding kushishino ityhubhu lokusila. Isekethe yayo eyahlukileyo yokulawula amandla kazibuthe inokuqinisekisa ngesantya esibanzi esilawula ubungakanani bemoto yeDC. Isekethe yolawulo lwedigital yedijithali yalo ayinakwenza kuphela i-drive ye-DC ukuba ibe nomsebenzi ozinzileyo kunye nokuchasana nokuphazamiseka, kodwa ikwanomsebenzi olungileyo womsebenzisi olungele ukusebenza.I-drive yeDC iquka: imodyuli yolawulo excitation, yesekethe yolawulo DC yedijithali ngokupheleleyo.
IKhabinethi yeDr Drive
Ikhabhathi yeDrayivu yeDrayivu ine-3 uthotho: imo yokulawula ikhompyuter yolawulo, imo yoqobo yedijithali ye-Euro Drayivu kunye nayo yonke imo yedijithali yokwandiswa kwemodi ye-Euro Drayivu. Sebenzisa isantya-sangoku solawulo olusondeleyo lokujikeleza ngokusondeleyo, kunye noluhlu olubanzi lokumiselwa kwesantya, ukusebenza okunamandla kakhulu, unxibelelwano lweemotor ezininzi njl.
Esi sixhobo siphesheya sisebenza kwimizi mveliso elula, ukwenza iphepha, iplastiki, umbhobho kunye ne-tube welding, imichiza, isamente njl.
Qaphela ibanga: 460v / 230v kwinqanaba langoku: 100A ~ 3000A
Zonke izinto zedijithali (uthotho lwe-Euro Drive)
I-OL-70A / 460V
Isixhobo se-OL-110A / 460V
Isixhobo se-OL-150A / 460V
I-OL-180A / 460V
I-OL-270A / 460V
I-OL-360A / 460V
I-OL-500A / 460V
I-OL-800A / 460V
Ukuqhuba kunye nokulawula isantya kwemoto yeDC, ubonelelo oluphezulu lombane weDC.
Uyilo olugqibeleleyo lolwakhiwo
Uyilo oluhlanganisiweyo lweDC drive kunye neempawu zesakhiwo esihambelanayo kunye nobukhulu obuncinci. Uhlobo loqobo okanye ulwakhiwo lohlobo lolukhetho.
②.I-loop ephezulu ye-thyristor yamkela ngokufanelekileyo ukupholisa iradiyetha efanelekileyo yokufaka kunye nokugcina.
Uyilo oluhambelanayo oluphezulu lwe-electromagnetism design, i-electromagnetism radiation ifikelela kumgangatho wesizwe.
④.Kuvaliwe uyilo lwekhabhathi, ukuhlangabezana neemfuno ezingqongileyo kwindawo engqongileyo.
Inkqubo epheleleyo yolawulo lwedijithali
①.Sebenzisa i-590DIGITAL uthotho olupheleleyo lwesilawuli sedijithali ukuze uqonde ngokuthe ngqo ukungqinelana kunye nolawulo oluphezulu lokuchaneka kwesantya seemoto kunye nesantya sokuphendula ngokukhawuleza.
Ipharamitha yokusebenza kweMotor isebenzisa useto lwemenyu yedijithali, efanelekileyo kwaye eguqukayo ngeHMI elungileyo.
Ukunikezelwa kwamandla kunomsebenzi okhuselekileyo wokukhusela kunye nokusebenza okuthembekileyo kunye nezinga eliphantsi lokusilela.
Ukukhetha izixhobo *
1.Khetha imodeli yedrayivu yeDC njengombane olinganisiweyo kunye namandla alinganisiweyo emoto yeDC.
2. Ukuqhutywa kweDC kufuneka kugcinwe i-20% yomda wamandla.
Ikhonsoli ifezekisa ulawulo olukude kunye nolawulo lwamandla e-solid state ye-HF ye-welder, efakwe nge-LCD; ikwanazo nezikhombisi zombane we-armature, i-voltage yentsimi kwi-DC drive kwikhabhathi kunye nezalathi ze-voltage ye-DC, i-DC yangoku kwisilayidi. umsebenzi wokulawula iluphu uyanyanzeleka ukuba ukhethe. Ikhonsoli inomahluko woyilo ngokweentlobo ezahlukeneyo kunye nobungakanani bokuthelekisa ikhabethe yedrive drive.
Egqithileyo Ukujikeleza kweNkqubo yokuPholisa kwaManzi
Okulandelayo: Ukusebenza okuphezulu kwe-China okwenziwe ngokuqinileyo H-Beam hf induction welder 1000kw umatshini wokuwelda